Ikhasethi Lokuhlola Lomkhuhlane i-A & B
Isinyathelo esisodwa Sars-CoV2 (COVID-19) IgG / IgM Test
Isivivinyo seRabies Virus Antibody Rapid
I-Feline Toxoplasma gondii IgG / IgM Test
Ukuhlolwa kwesifo i-Testsea Malaria pf / pan kwe-Tri-line Rapid ...
Igama lomkhiqizo Ikhasethi likaFeline TOXO IgG / IgM Test
I gama le-brand Testsealabs
I-P lace yomsuka Hangzhou Zhejiang, China
Ubukhulu 3.0mm / 4.0mm
Isibonelo IGazi Lonke, iSerum
Ukunemba Ngaphezulu kwe-99%
Isitifiketi I-CE / ISO / FDA
Funda Isikhathi I-10min
Iwaranti Ukushisa kwegumbi izinyanga ezingama-24
I-Feline Toxoplasma gondii IgG / IgM Rapid Test isivivinyo esibucayi kakhulu futhi esiqondile sokutholwa kwe-TOXO ku-canine lonke igazi noma i-serum. Ukuhlolwa kuletha isivinini, ukwelula kanye nekhwalithi yokuhlola endaweni yamanani ephansi kakhulu kunenye imikhiqizo.
• Izinto ezinikeziwe
I-1.Test Cassette 2.Droppers 3.Buffer 4.Package Faka
• Izinto ezidingekayo kepha azinikezwanga
I-Timer 2. Iziqukathi zokuqoqa iziqongo 3.Centrifuge (ye-plasma kuphela) 4.Lancets (ngegazi elingene ngomunwe kuphela) 5.Imhubhu ye-capillary capillary nokusabalalisa i-bulb (ngegazi lomunwe kuphela)
Ibhodi lokutholwa lihlukaniswe imigqa emibili, futhi umphumela ucacile futhi kulula ukuwufunda.
Funda ukusebenzisa iminithi elingu-1 futhi akukho mishini edingekayo.
Imizuzu engu-10 ephuma emiphumeleni, asikho isidingo sokulinda isikhathi eside.
1) Vumela zonke izakhi zekhithi nesampula ukuze zifinyelele ekushiseni kwegumbi ngaphambi kokuhlolwa.
2) Faka 1 ithonsi legazi lonke, i-serum noma iplasma kusampula kahle bese ulinda ama-30-60seconds.
3) Faka i-3drops ye-buffer kwisampula kahle.
4) Funda imiphumela kungakapheli imizuzu engu-8-10. Musa ukufunda ngemuva kwemizuzu engama-20.
Mina NTERPRETATION SOMTHETHO IMIPHUMELA
-Positive (+): Ukuba khona
-Negative (-): Kuvela kuphela umugqa C ocacile. Awukho umugqa we-T.
-Kungasebenzi: Akukho ulayini onemibala ovela ku-C zone. Akunandaba uma kuvela umugqa we-T.
We, Hangzhou Testsea Biotechnology Co, Ltd inkampani ekhula ngokushesha ye-biotechnology ekhethekile ocwaningweni lokucwaninga, ukuthuthukisa, ukukhiqiza nokusabalalisa kwezinto ezisetshenziswayo zokuhlola ukuhlolwa kwe-vitro diagnostic (IVD) kanye nezinsimbi zezokwelapha.
Isikhungo sethu i-GMP, ISO9001, kanye nesitifiketi se-ISO13458 futhi sivunyelwe yi-CE FDA. Manje sesibheke ukusebenzisana nezinkampani eziningi zaphesheya kwezilwandle ukuze kuthuthukiswe.
Sikhiqiza isivivinyo sokuzala, izivivinyo zezifo ezithathelwanayo, ukuhlolwa kokusebenzisa izidakamizwa, ukuhlolwa kokumelwa kwenhliziyo, ukuhlolwa kokumaka kokuqina, ukuhlolwa kokuphepha nokuhlolwa kanye nokuhlolwa kwezifo zezilwane, ngaphezu kwalokho, uhlobo lwethu lwe-TESTSEALABS baziwa kakhulu ezimakethe zombili zasekhaya nezaphesheya. Izinga eliphambili nezintengo ezinhle zisenza sikwazi ukuthatha amasheya wasekhaya angaphezu kuka-50%.
Langaphambilini: Ukuhlolwa kwe-Feline Panleukopenia Antigen FPV okusheshayo
Okulandelayo: Isivivinyo seRabies Virus Antibody Rapid
Isivivinyo se-Ehrlichia Canis Antibody (E.Canis Ab)
Ukuhlolwa kwe-Feline Panleukopenia Antigen FPV okusheshayo
Feline Infciwane Peritonitis FIPV RapidTest
ICanine Pregnancy Relaxin (RLN) Isivivinyo Esheshayo
Feline Coronavirus Test , High Sensitive Feline Coronavirus Ag Test Kit , Canine Coronavirus Ag Test , iCanine Coronavirus Ag Rapid Test Kit , Feline Coronavirus Fcv Ag Test Kit , Feline Coronavirus Kit Kit ,